पुरुषका यस्ता बानीले आकर्षित हुन्छन महिला |
On: २०७६ असार ८ गते, आईतवार, ०२:१९ बजे प्रकाशित
काठमाडौं । सम्बन्धमा सधै राम्रो र सधै नराम्रो भन्ने हुँदैन् । एकअर्काको कतिपय भावना अनि चाहनाको सम्मान गर्दै अगाडि बढेमा सम्बन्धलाई सफल बनाउन सकिन्छ । त्यसो त महिलाहरू आफ्नो जीवन साथीले स–साना कुरामा पनि ख्याल गरिदिओस् भन्ने चाहना राख्छन् ।
धेरै श्रीमान श्रीमतीविच माया बढी दर्शाउने वा देखाउने शब्द हो ‘आइलभयु’ । धेरैले‘आइलभयु’ भन्दा सम्बन्धमा अझ विश्वास थपिने मान्यता राख्छन् । तर, त्यसका अलावा अरु पनि गर्न सकिन्छ । मायालु पाराको स्पर्श, विहानको समयमा चुम्बन लगायतले पनि आफ्नो जीवनसाथीको मन जित्न सकिन्छ । तपाईको साथीलाई पनि बोली भन्दा तपाईले गरेको स्पर्श बढी मनपर्न सक्छ । आउनुहोस् जानौ महिलालाई आकर्षित गर्ने पुरुषहरूका यी बानीहरू :
तपाईमा कस्तो परिवर्तन चाहान्छिन त र ?
अन्य सम्बन्धित समाचार: कोरोना अपडेट: आज संक्रमितभन्दा निको भएर घर फर्कनेको संख्या धेरै
कहाँ जाने मन छ र ?
हुन त कमै दम्पत्तीमा यस्तो प्रश्न पुरुष वा महिलाले गर्छन् । बिहेपछि मेरै हो वा प्रेमपछि मेरै हुने हो भन्ने मानसिकताले बढी गाँजेको पुरुषमनमा घर बनाउनाले ‘अब मेरै त हो नि’ भनेर खासै ख्याल गर्दैनन् । तर पनि सम्बन्ध भनेको हरेक पटक सम्झौता गर्दै अघि बढ्नुपर्छभनिन्छ । त्यसैले आफ्नो साथीको हरेक पल ख्याल गर्नु पर्नेहुन्छ । त्यसैले सम्बन्ध अगाडि बढाउँदै लैजाने क्रममा तपाईले यो सोध्न जरुरी हुन्छ कि, तिमीलाई मेरो साथ कस्तो लागेकोछ रु यसले पनि तपाईको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन सहयोग गर्दछ ।
यसले तपाई दुवैजनालाई उत्साहित गरिदिन्छ । तपाई यस्ता फरक विषयमा सोचिरहनुहुन्छ कि, जबसम्म तपाई दुवैजना सहि नतिजामा पुग्नुहुन्न, कोशिष गर्नुहोस् कि, जसले तपाईको साथी र तपाईलाई अझ नजिक बनाओस् । एजेन्सी
२०७६ असार ८ गते, आईतवार, ०२:१९ बजे प्रकाशित